‘कान्तिपुर’ र ‘रासस’मा छापिएको फोटोमा भएको रमाइलो – MySansar
‘कान्तिपुर’ र ‘रासस’मा छापिएको फोटोमा भएको रमाइलो
Posted on December 3, 2020 by Salokya
हिजोको कान्तिपुर हेर्नुभो? पाँचौँ पेजमा एउटा राम्रो फोटो छापिएको छ। फोटोमा तोरीबारी हुँदै ब्याग बोकेका विद्यार्थीहरु स्कूल जाँदै गएको भनिएको छ। कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकाको यो फोटोमा क्रेडिट लाइनमा लेखिएको छ, सनिउल्ला धोबी/रासस।
रासस अर्थात् राष्ट्रिय समाचार समिति सरकारले सञ्चालन गरिरहेको समाचार एजेन्सी हो। निश्चित शुल्क तिरेर विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइनहरु यसका ग्राहक हुन्छन्। यसवापत राससले समाचार र फोटोहरु ग्राहकहरुलाई दिन्छ। रमाइलो के भयो भने यो फोटो जसको नाममा छापियो, त्यो भन्दा अघि नै अरु कै नाममा स्थानीय पत्रिकामा छापिसकेको रहेछ।
यो हो गएको शनिबार कपिलवस्तुमा प्रकाशित ‘साझा न्युज’को पेज ६। यसमा सन्जय मल्ल/साझान्युज क्रेडिटलाइनमा यही फोटो छापिएको छ।
त्यतिमात्र हैन सञ्जय मल्लले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि गएको शुक्रबार यही फोटो राखेका छन्।
उनले यही ठाउँका अरु फोटो पनि फेसबुकमा राखेको देखिन्छ।
अझ रमाइलो के हो भने यो फोटोमा क्याप्सन चाहिँ उनले स्कूलबाट पढाइ सकेर घरतर्फ जाँदै लेखिएको छ। राससमार्फत् कान्तिपुरमा छापिएको फोटोमा भने ‘विद्यालय जाँदै’ पो लेखिएको छ।
कान्तिपुरमा छापिएको राससको फोटोमा त्यसैले दुई वटा गल्ती भए।
एक, फोटोग्राफरको नामै परिवर्तन भयो।
दुई, फोटोको विवरण गलत भयो। खिच्नेले पढाइ सकेर घरतर्फ जाँदै लेखेका छन् भने कान्तिपुर/राससमा भने विद्यालयतर्फ जाँदै पो लेखिएको छ।
छैन त रमाइलो ? 🙂
2 thoughts on “‘कान्तिपुर’ र ‘रासस’मा छापिएको फोटोमा भएको रमाइलो”
Pingback: राससले गरेको अर्को रमाइलो- रातोपाटीको वाटरमार्कसहितको फोटो वितरण « Mysansar
कापुले फोटो फ्लिप गरेको भए क्याप्सनमा भनेझैँ मिल्ने थियो होला। त्यो पनि चुकेछ।